ဆောင်းပါး Archives - The Lobby
Show Your Some Respect!!!
In: Knowledge, ဆောင်းပါး
အထင် အထာနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳 ကျွန်တော် ဒီဓါတ်ပုံကို စမြင်တုန်းကသဘောရိုးပဲတွေးမြင်ခဲ့တာပါ။ကြောင်လေးက မြွေဟောက်ရဲ့အမြီးကိုကြွက်လို့ထင်ပြီး ဖမ်းဖို့ပြင်နေတဲ့ ပုံပေါ့။ သေချာလေ့လာကြည့်မှ ဒါဟာ အီတလီပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mr.Marco Melgrati ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ သက်ဝင်ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာဖော်ကျူးချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုပါ။ မင်းကိုယ်မင်း ဟုတ်လှပြီးလို့ တွေးပြီးကစားနေတဲ့လူဟာ ဘယ်လိုလူလည်းဆိုတာမင်းလုံးဝမသိသေးပဲ လွယ့်လင့်တကူ မကစားပါနဲ့.. သူများက မင်းအကြောင်း အကုန်လုံးကိုမြင်ပြီး သိပြီးသားပါ မင်းကို မသတ်ချင်သေးလို့ကြည့်နေတယ် ဆိုတာ မှတ်ပါ။ ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်လိုလူစားနဲ့ တွေ့တွေ့လူတိုင်းကိုလေးစားပါ ၊ ရိုးသားပါ ၊ မကစားပါနဲ့ ။မင်းကစားလို့ လက်တစ်လောမင်းနိုင်ချင်နိုင်ပေမဲ့ နောက်လှည့်ရင် သေပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာ အမြဲသတိရပါ။ဒါကြောင့် လူတိုင်းကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးပြီး မဆက်ဆံပါနဲ့ လေးစားမှုရှိပါ။Continue Reading
တဘစာလုံးအတွက် သင် သူ့ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်…
In: Editor Choice, ဆောင်းပါး
ချစ်သူအချင်းချင်း mutual respect လိုသလား?လင်မယားအချင်းချင်း mutual respect လိုသလား? ဟုတ်ကဲ့လိုပါတယ်… မတူညီတဲ့လူနှစ်ဦး တူတူသွားရမယ့်ခရီးမို့လို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြန်အလှန်လေးစားဖို့သိပ်လိုပါတယ် အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိရင်ရှေ့ဆက်လို့မရပါဘူး… တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အထင်မကြီးရင်လက်တွဲလို့မရပါဘူး…. တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်မလေးစားဘဲ အပြစ်သာမြင်နေရင်တူတူသွားလို့မရပါဘူး….. ကျွန်တော်တို့တွေက တစိမ်းတွေပါ..အတိတ်တွေမတူကြပါဘူးအတွေးတွေမတူကြပါဘူးအမြင်တွေကွဲပြားကြပါတယ်… တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါမယ်တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့စေတနာတွေကို လေးစားရပါမယ်တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေကို နားလည်ပေးပြီးတက်နိုင်သလောက်ပြုပြင်ယူရပါမယ်.. ဒါဟာ mutual respect ပါ… ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေရဲ့ အရည်အချင်းကိုအသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူးသူတို့တွေရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကိုအထင်မကြီးခဲ့မိဘူးသူတို့တွေရဲ့ ဝါသနာတွေကိုပြက်ရယ်ပြုမိခဲ့တယ်သူတို့တွေရဲ့ စေတနာတွေ ကူညီမှုတွေအနစ်နာခံပေးမှုတွေကို တန်ဖိုးမထားမိခဲ့ဘူးသူတို့အတွေးတွေကို နေရာမပေးခဲ့မိဘူး ‘ငါသာလျှင်ကောင်းတယ်’ ‘ငါကပဲမှန်တယ်’ဆိုတဲ့အတ္တတွေကိုဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလေဆိုပြီး ဖော့တွေးရင်းသူတို့အပေါ် မလေးစားခဲ့မိဘူး…ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥပေက္ခာတွေအားလုံးစုပေါင်းမိသွားတဲ့တနေ့မှာသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့နားက စွန့်ခွာသွားကြပါတယ် ချစ်သူတော်တော်များများဟာဒီအချက်တွေကြောင့်သာ လမ်းခွဲသွားကြတာပါ.. ဒါဟာ ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရပ်ပါ… ဟုတ်ကဲ့…ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လင်မယားပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်ကြပါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလည်း အပြန်အလှန်လေးစားပေးပါ တစ်ယောက်လုပ်နိုင်တာကို တစ်ယောက်ကလေးလေးနက်နက် အသိအမှတ်ပြုပါContinue Reading
Bill Gates ထက် ပိုချမ်းသာတဲ့လူ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ကို“ကမ္ဘာပေါ်မှာ သင့်ထက် ပိုပြီးချမ်းသာတဲ့သူ ရှိသလား”လို့ လူတစ်ဦးက မေးတယ်။ “ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီး ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်။” လို့ ဘီလ်ဂိတ်က ပြန်ဖြေပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဘီလ်ဂိတ်က သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီအချိန်တုန်းက မချမ်းသာသေးပါဘူး။လူသိလည်း မများသေးပါဘူး။ တစ်နေ့ နယူးယောက်လေဆိပ်မှာ သတင်းစာရောင်းသူ တစ်ဦးနဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် သတင်းစာ တစ်စောင်ကို ဝယ်ချင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံအကြွေမရှိမှန်းငွေပေးခါနီးမှ သိခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဝယ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမျိုသိပ်ပြီး အဲဒီသတင်းစာကို ရောင်းတဲ့သူဆီပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှ အကြွေမပါကြောင်း သူ့ကို ပြောပြပါတယ်။ဒါနဲ့ “ဒီစာစောင်ကို အလကားပေးပါတယ်၊ ယူပါ” လို့သတင်းစာရောင်းသူက ပြောပါတယ်။သူက မရမကContinue Reading
ရွှေပြည်သာတွင်ဘင်္ဂါလီ ၉၈ ဦးဖမ်းမိ
In: News, ဆောင်းပါး
ယနေ့ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နံနံက်ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းတွင် မသင်္ကာဖွယ်လူတစ်ဦးကို တွေ့ရှိစစ်ဆေးရာမှ အိမ်တအိမ်တွင် ပုန်းခိုနေသော တရားမဝင်ရောက်ရှိနေသည့်ဘင်္ဂါလီကျား(၂၅)ဦးနှင့် မ(၇၃) ဦးစုစုပေါင်း(၉၈)ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နံနက်၁၀:၀၀ နာရီက ဘုရင့်နောင်လမ်းပေါ်တွင် မသင်္ကာဖွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမှ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး လိုဘီအာလုံ(၁၉နှစ်)ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ စစ်ဆေးချက်အရအခြားသူများလည်းပါကြောင်းသိရသဖြင့် နေ့လယ် ၁၃:၃၀နာရီတွင်ဆက်လက်ရှာဖွေရာ ရွှေပြည်သာမြို့အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်တအိမ်မှဘင်္ဂါလီကျား(၈)ဦး၊ မ(၁၀) ဦး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိအိမ်တအိမ်မှ ဘင်္ဂါလီကျား(၁၇)ဦး၊ မ (၆၃) ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ Tomorrow News JournalContinue Reading
ခံ တွင်း ပုတ် အ နံ့အတွက်
In: Health, News, ဆောင်းပါး
ခံ တွင်း ပုတ် အ နံ့ သည် လူ တစ် ယောက် အ တွက် မိ မိ ကိုယ် ကို ယုံ ကြည် မူ မဲ့ စေ ပါ သည် ၊ ခံ တွင်း အ နံ့ မ ကောင်း သူ များ သည် လူ အ များ ကြား တွင် စ ကား ပြော ဆို ရာ တွင် မိ မိ ၏ ပါး စပ် မှ အContinue Reading
မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် မဲလိမ်ခိုးမှုဖော်ထုတ်ရန်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်
December ,3, 2020 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ ဝါးနက်ချောင်းကျေးရွာ ဘောလုံးကွင်းတွင် ယနေ့ နံနက် ၉နာရီအချိန်က မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတစ်ချို့တို့မှ “မဲလိမ်မဲခိုး ဖေါ်ထုတ်ပေးရေး (ဒို့အရေး)ဟူသည့်ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အား ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသူများသည်”မဲလိမ်မဲခိုး ဖေါ်ထုတ်ပေးရေး(ဒို့အရေး)””လွပ်လပ်မျှတသော စီစစ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပေးရေး(ဒို့အရေး)””ပြည်သူ့ဆန္ဒအမှန်ဖေါ်ထုတ်ပေးရေး(ဒို့အရေး)””တရားမျှတမှုမရှိသောရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အလိုမရှိ ” စသည့်စာသားပါစက္ကူကားချပ်များကိုင်ကာကြွေးကျော်သံများဖြင့်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ By-မြတ်ဟိန်းကျော်(YNI)Agency#YNI ရန်ကုန်သတင်းပုံရိပ် #credit:Continue Reading
December 2,2020 တရားထိုင်တယ်၊ တရားအားထုတ်တယ်၊ ဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့ ဆိုကြရာမှာ တချို့က ဘုရားစင်ရှေ့ထိုင်ပြီး ရှုမှတ်နေတာ တစ်မျိုးတည်းကို ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုဣရိယာပုဒ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့လည်း ရှုမှတ်နေလို့ ရပါတယ်။ လူအများစုဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စား၀တ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတော့ အချိန်ပိုမရှိလို့ တစ်နေ့မှာ တစ်နာရီလောက် တရားထိုင်နိုင်ဖို့ကိုတောင် မနည်းကြိုးစားနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာမှာ နာရီ၀က် ဒါမှမဟုတ် တစ်နာရီလောက်သာ တရားထိုင်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ လုံး၀တရားမရှုမှတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းနေမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာမှာ အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်တဲ့အချိန်လေးက နည်းလွန်းပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်တွေက မနှိုင်းယှဉ်သာလောက်အောင် များပြားလွန်းနေမှာပါ။ လူတိုင်းဟာ ကွေးသောလက် မဆန့်ခင်၊ ဆန့်သောလက် မကွေးခင်Continue Reading
မနက်ခင်း အိပ်ရာနိုးချိန်မှာ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုး (၅) ခု
မနက်ခင်း အိပ်ရာထတဲ့အချိန်မှာ လူတိုင်းက အကျင့်ကိုယ်စီနဲ့ မနက်ခင်းကို စတင်လေ့ ရှိပါတယ်။ မနက်ခင်းက လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးပါတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့သူတွေကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလေ့အထတွေနဲ့ မနက်ခင်းကို နိုးထလေ့ ရှိပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာတော့ အခုလို အကျင့်ဆိုးတွေကတော့ မလုပ်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ (၁) နှိုးစက်မြည်ပြီး ထပ်မအိပ်ပါနဲ့ မနက်ခင်းမှာ မလုပ်သင့်ဆုံး အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နှိုးစက်က မြည်နေပေမယ့် Snooze လုပ်ပြီး ထပ်အိပ်တာက သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ပုံကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလို အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင် ညဘက် အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်။ (၂) ကော်ဖီ မသောက်ပါနဲ့ တစ်နေ့တာကို ကော်ဖီသောက်ပြီး စတင်တဲ့သူတွေလည်းContinue Reading
ငွေဝင်အိမ်မက် ၇ မျိုး
အိမ်မက် အမျိူးမျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို အိမ်မက်မျိုးတွေ မက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကို ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ နို့ (ဒါမှမဟုတ်) ပျားရည်” အိမ်မက်ထဲမှာ နို့ တွေကို မက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို မက်တာ မျိုးက မကြာခင်မှာ ငွေ ဝင်Continue Reading